दशै टिकाकै दिन मामाको खुटृा का-टियो,भान्जासहित ६ जना प*क्राउ किन का-टे खुटृा | Public 24Khabar
Home News दशै टिकाकै दिन मामाको खुटृा का-टियो,भान्जासहित ६ जना प*क्राउ किन का-टे खुटृा
दशै टिकाकै दिन मामाको खुटृा का-टियो,भान्जासहित ६ जना प*क्राउ किन का-टे खुटृा
नायिका निशा अधिकारी अहिले चलचित्र क्षेत्रबाट टाढा छिन् । क्रिकेटर शरद भेष्वाकरसँग बैबाहिक जीवनमा बाँधिएपछि उनी चलचित्र क्षेत्रबाट अलग भएकी हुन् । निशा आमा पनि बनिसकेकी छिन् । उनका छोरा २१ महिनाका भइसके ।
लामो समय चलचित्र क्षेत्रबाट टाढा भएकी निशाले अब भने चलचित्र क्षेत्रलाई याद गर्न सुरु गरेकी छिन् । पछिल्लो समय उनी केही सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि देखिन थालेकी छिन् । जहाँबाट उनलाई चलचित्र क्षेत्र प्रति पुनः मोह जागेको कुरा पत्तो पाउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थिस्त हुन थालेकी निशालाई एउटै प्रश्न गरिन्छ, ‘कमब्याक कहिले ?’ बुधबार चलचित्र ‘सेल्फी किंग’को पि्रमियरमा उपस्थित निशालाई सोही प्रश्न तेर्सियो । त्यहाँ निशाले आफू चलचित्र क्षेत्रमा कमब्याक गर्ने विषयमा सोचिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘म कमब्याकको बारेमा सोचिरहेको छु । तर, तुरुन्तै आइहाल्ने अवस्थामा छैन । मलाई कमब्याकको लागि केही समय लाग्न सक्छ ।’
अहिले निशा छोराको स्याहार सुरारमा नै रमाइरहेकी छिन् । छोरा स्कुल जान सुरु गरेपछि मात्र चलचित्र क्षेत्रमा आउने निशाको योजना रहेको छ । उनले थपिन्, ‘अहिले म त ‘फुल टाइम मदर’ भएको छु । छोरालाई नहुर्काएसम्म चलचित्र क्षेत्रमा आउने चान्स नै छैन ।’ उनी आफूले जानेको नै अभिनय भएकाले चलचित्र क्षेत्रसँग टाढा रहेर बस्न नसक्ने बताउँछिन् ।
नायिका निशा चलचित्र क्षेत्रमा सफल नाम हो । उनी अभिनित केही चलचित्रहरुले बक्स अफिसमा राम्रो कमाइ गरेका छन् । पछिल्लो समय निशा निर्माता पनि बनेकी थिइन् । उनको निर्माणमा तयार भएको चलचित्र ‘झ्यानाकुटी’ व्यापारिक र समीक्षात्मक रुपमा औसत चलचित्र बनेको थियो ।
अमेरिकामा एक कलेज विद्यार्थीले लामो समयसम्म हजुरआमाको घरको ग्यारेजलाई क’वाडीको थुप्रो सम्झिए । तर, एक दिन उनले यो ग्यारेज खोलेर हेर्दा उनको भाग्य खुल्यो । एरिगन नामका यी विद्यार्थीले एक ब्लगमा भनेअनुसार उनलाई २० वर्षदेखि लाग्थ्यो कि यो ग्यारेजभित्र क’वाडी मात्र छ । तर, जब उनले ग्यारेज खोलेर हेरे त्यहाँभित्र त्यो समयका सबैभन्दा लग्जरी स्पोर्ट कार थिए ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Previous articleभ*र्खरै हेर्नुहोस्, गोर्खा सैनिकले मोदीलाई यस्तो गर्न अपिल गरेपछि भारतमा हं*गामा ! अब के होला? Gorkhali
Next articleसानो उमेर मै जिउमा देबता आय पछि बनिन माता हेर्नुसत बनझाक्रि पनि सङ्गै , बैनिको सुस्वास्थ्यको कामना